Momba anay - Hi Promos - Ningbo Hipromos International Trading Co., Ltd.
Akanjo sy fitafiana hampiroborobo
Caps & Satroka fampiroboroboana
Flip Flip Promotional
Fitaovana fampiroboroboana fiara
Mpanala ranomandry fampiroboroboana
Kitapo fampiroboroboana sy kojakoja momba ny dia
Kitapo fandraharahana fampiroboroboana
Kitapo mangatsiaka fampiroboroboana
Kitapo kosmetika fampiroboroboana
Kitapo fakantsary fampiroboroboana
Kitapo sy valizy fampiroboroboana
Kitapo fanatanjahan-tena fampiroboroboana
Tote kitapo fampiroboroboana
Kitapo divay sy mpitatitra
Entana elektronika fampiroboroboana
Fitaovana elektronika fampiroboroboana
Banky fampiroboroboana angovo fampiroboroboana
Kitapo USB fampiroboroboana
Famantaranandro sy famantaranandro
Fahasalamana manokana sy manokana
Vokatra fanentanana fampiroboroboana
Mpanamaivana ny adin-tsaina
Fitaovana fisotroana fisotroana sy fisotroana
Fisotroana fisotroana fanentanana
Fanomezana fialantsasatra momba ny fialantsasatra
Vokatra fampiroboroboana an-trano
Entana fampiroboroboana an-dakozia
Famatsiarovana biby fiompy
Fialam-boly sy fialamboly fampiroboroboana
Toerana fampiroboroboana sy fitsangatsanganana
Entam-barotra tsy azo ovaina
Ponchos sy akanjo mafana
Sunglasses sy kojakoja fampiroboroboana
Entana fanohanana fampiroboroboana
Lamba famaohana fampiroboroboana
Birao fampiroboroboana & Stationery
Fitaovana fampiroboroboana ny birao fampiroboroboana
Vokatra taratasy fampiroboroboana
Portfolio sy folder fampiroboroboana
Fitaovana tradeshow fampiroboroboana
Fitaovana fanoratana fampiroboroboana
Kilalao fampiroboroboana sy zava-baovao
Lalao sy kilalao fampiroboroboana
Kilalao fehiloha fampiroboroboana
Izahay dia manolo-tena hanolotra vokatra sy serivisy kilasy ambony indrindra izay manamora ny mpanjifanay manana lanja hanitatra ny asan'izy ireo ankoatra ny mpamatsy eo an-toerana sy hampisondrotra ny habetsaky ny varotra, manohitra ny vidin'ny fifaninanana sy ny kalitao mafy. Miezaka izahay mba hanorina fifandraisana maharitra maharitra miaraka amin'ny mpanjifa tsirairay, hizaha toetra ny mpiara-miasa vaovao aminao any Shina mba hahitana izay azonay atao ho anao.
Hi Promos dia niorina tamin'ny taona 2010 namokarana entana fampiroboroboana namboarina SY varotra marika any Ningbo City, Sina, miroborobo mba ho mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny fizarana mahomby, fizahana maimaimpoana ny kaomandy mihazakazaka ary ny tolo-kevitra fandefasana lafo. Manentana ny mpiasa matihanina tsirairay izahay amin'ny fanatsarana hatrany ny orinasanay miaraka amin'ny andraikitra azo antoka sy feno, manantena ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika ho valiny.
Ekipa tanora malala izahay miaraka amin'ny filan'ny nofo, tokony ho faly ianao hiara-hiasa amin'ireo mpiasa mamorona.
Ny fanomezana varotra fampiroboroboana dia fomba iray mahomby tokoa amin'ny fanaovana doka amin'ny asa aman-draharaha, fikambanana na hetsika, izay azo ovaina amin'ny soratra sy sary maharitra. Izahay dia manolo-tena ho mahay bebe kokoa ary hanara-maso hianatra bebe kokoa momba ny indostrian'ny vokatra fampiroboroboana, izay manampy ireo mpiara-miasa aminay hanitatra ny asa aman-draharaha miaraka amina entana miavaka sy entana lafo vidy. Anisan'izany ny kitapo fampiroboroboana, satroka, entana elektronika, kojakoja ara-pahasalamana, vokatra an-kalamanjana sy fitsangatsanganana, fanomezana an-trano, fahatsiarovana, sns.
Izahay dia mikendry ny ho mpiara-miasa sy birao tokana anao any Shina mba hanao izay tokony hataonay ho solontena ary handray andraikitra feno amin'ny serivisy manara-penitra.
Office: manam-pahaizana manokana dia mifandray amin'ny mpanamboatra. Ny biraonao eto!
Fandoavana: azo ifampiraharahana toy ny isam-bolana na fametrahana. Ataovy azo antoka ny vola!
Fanaraha-maso kalitao: a 3rd karama ny mpanara-maso antoko. Kalitao Voalohany!
Sourcing: antoka ny vidin'ny orinasa. Mitsitsy vola!
Fitaterana: mitondra fotoana ara-potoana miaraka amin'ny fomba fandefasana hafa, an-dranomasina, rivotra, lalamby na amin'ny alàlan'ny mpandefa hafatra (DHL, Fedex).
Tena zava-dehibe aminay ianao. Koa manentana ny ekipantsika izahay mba hanana fihetsika mahomby sy haingana kokoa. Amin'ny maha-mpiara-miasa mahomby sy maharitra anao, dia hanao izay tsara indrindra izahay hametrahana ny traikefanay sy ny fahalalantsika nefa tsy hanaiky lembenana amin'ny tranga tsirairay, na inona na inona dia mitaky baiko US $ 100 na baiko US $ 1.000.000.
Azo atokisana & maharitra: mahita, maheno, mikasika ary mahatsapa akaiky isika.
Mahay: ny tolotra dia ho vonona ao anatin'ny 24 ora na hiaro anao vahaolana mety.
Andao hiresaka izao. Ny safidinao voalohany amin'ny fanomezana natokana ho an'ny manokana sy ny fampiroboroboana entana any Shina - Hi Promos. Alefaso mailaka anay anio hangataka fanampiana.
Rm1705, No.2 Bldg, Shangdong Business Center, No.20, Lane 1918, C Shanghai Rd., Yinzhou District, Ningbo 315041, Sina